Codsiyada - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Waa maxay kamaradaha loo isticmaalo sahaminta&GIS
Waa maxay sababta kaamerooyinka qarsoon loogu isticmaalo Sahanka&GIS
Waa maxay faa'iidooyinka kaamerooyinku sahaminta&GIS
Sawirada ay qaadaan kamaradaha qarsoon waxay dhaliyaan qaab-dhismeed heer sare ah oo faahfaahsan oo 3D ah meelaha tayada hoose, duugowday ama xitaa aan lahayn xog, laga helayo. Sidaa darteed waxay awood u siinayaan khariidado cadastral sax ah oo si dhakhso leh oo fudud loo soo saaray, xitaa meelaha adag ama ay adagtahay in la galo. Sahamiyeyaashu waxay sidoo kale ka soo saari karaan sifooyinka sawirada, sida calaamadaha, geesaha, calaamadaha waddooyinka, biyo-biyoodyada dabka iyo bullaacadaha.
3D GIS waxaa loola jeedaa: 1) Xogtu waxay leedahay kala saarid qani ah
3D GIS waxa ay tilmaamaysaa: 2) Lakab kastaa waa maaraynta shayga
3D GIS waxaa loola jeedaa: 3) Shay kastaa wuxuu leeyahay faleebo iyo sifooyin qaabka 3D
3D GIS waxaa loola jeedaa: 4) Si toos ah u soo saarista shayga sifada
Waa maxay faa'iidooyinka kaamerooyinku sahaminta&GIS?
Sahanka iyo khariidaynta iyo xirfadlayaasha GIS waxay si dhakhso ah ugu jeestaan ​​​​xalalka aan cidi wadin iyo 3D si ay si fiican u qabtaan shaqada. Kamaradaha roobka da'aya ayaa kaa caawinaya:
(1) Waqti badbaadi. Hal duulimaad, shan sawir oo dhinacyo kala duwan laga soo qaaday, ayaa waqti yar ku qaata goobta xog ururinta.
(2) Tuur GCP-yada (inta aad saxnaanta ilaalinayso). Ku gaadh saxnaanta darajada sahanka waqti yar, dad yar, iyo qalab yar. mar dambe uma baahnid meelaha kantaroolka dhulka.
Baro sida loo isticmaalo kamarada qarsoon si aad u samayso sahamin/maabaynta/GIS waxay u shaqeysaa GCPs la'aanteed>
(3) Diidhi waqtiyada shaqadaada ka dib. Software-kayaga taageerada caqliga leh wuxuu si weyn u yareeyaa tirada sawirada (Sky-Filter), wuxuuna si weyn u wanaajiyaa waxtarka AT, wuxuu yareeyaa kharashka qaabeynta, iyo sii wanaajinta waxtarka socodka shaqada oo dhan. (Sky-Target).
Baro sida software-ku uu kaaga caawinayo inaad kaydsato wakhtiyada habaynta ka dib. >
(4) Badbaadada ilaali. Isticmaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kamaradaha qarsoon si aad xogta uga soo ururiso xagga sare ee faylalka/dhismayaasha,ma aha oo kaliya xaqiijinta badbaadada shaqaalaha,laakin sidoo kale badqabka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.